भतिजी रुखको टुप्पोमा, काका फेंदमा मृत फेला – Gulmiews
भतिजी रुखको टुप्पोमा, काका फेंदमा मृत फेला
July 24, 2015 Raju Gautam
गुल्मी , साउन ८ । आत्महत्या गुल्मीका लागि नौलो रहेन । तर आज गुल्मीमा केहि नौलो लाग्ने आत्महत्याको घटना प्रकाशमा आएको छ । गुल्मीको पिपलधारामा नातामा काका भतिजी पर्ने अन्दाजी १६ वर्षिया युवती रुखको टुप्पोमा झुण्डीएको अवस्स्थामा मृत फेला परेकी छन् भने अन्दाजी ४० वर्षिय पुरुष त्यसको फेंदमा मृत फेला परेका छन् । पिपलधारा गाविस वडा नम्वर–८ मा अन्दाजी ४० वर्षिय वेलबहादुर मुखीया खनियाको रुखको फेदमा मृत फेला परेको र उनकी भतिजी पर्ने अन्दाजी १६ वर्षिया सिता मुखीया त्यसै रुखको टुप्पोमा झुण्डीएको अवस्थामा मृत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
पिपलधारा गाविस वडा नम्वर–८ मा अन्दाजी ४० वर्षिय वेलबहादुर मुखीया खनियाको रुखको फेदमा मृत फेला परेको र उनकी भतिजी पर्ने अन्दाजी १६ वषिया सिता मुखीया त्यसै रुखको टुप्पोमा झुण्डीएको अवस्थामा मृत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
घटनास्थलमा पुगेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी निरीक्षक रामप्रसाद पौड्यालले भने–‘उनिहरु दुवै यस्तो अवस्थामा मृत फेला परेका छन्, स्थानियका अनुसार उनिहरु नातामा काका भतिजी पर्छन् भन्ने सुनिएको छ ।’ उनले थपे–‘तर के कारणले यस्तो अवस्थामा मृत फेला परे भन्ने कुरा अहिले हामीले भन्न मिल्दैन र स्थानियले पनि केहि भन्न चाहेका छैनन् ।’ उक्त रुखको करिव तिन ३ मिटर तल वेलबहादुर र रुखमा सिता झुण्डीएको अवस्थामा आज विहान मात्रै स्थानियले देखेर प्रहरीलाई खवर गरेको प्रहरी निरीक्षक पौड्यालले बताए । उनिहरु कति वेला सम्म घरमा थिए ? मृत्युको कारण के हुन सक्छ ? भन्ने विषयमा जिज्ञाषा राख्न खोज्दा कुनै पनि स्थानियवासी वोल्न चाहेनन् । स्मणरहोस् लगातार दिन तिन दिन देखि गुल्मीमा मानिसहरुले आत्माहत्या गरेका छन् । अस्ती रिडीमा, हिजो हस्तीचौरमा र आज पिपलधारामा नातामा काका भतिजी पर्ने मृत फेला परेका हुन् । गुल्मीमा गत केहि वर्ष यता आत्महत्या गर्नेहरुको सख्या बृद्धि हुँदै आएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७१-७२ को असार मसान्त सम्म गुल्मीमा ४७ जनाले आत्महत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको विवरणले देखाएको छ । ति मध्ये बढि मात्रमा पुरुषहरुले आत्महत्या गरेका छन् । एक वालक सहित आत्महत्या गर्ने पुरुषको संंख्या २७ रहेको छ । त्यस्तै दुई वालिका सहित २० जना महिलाहरुले आत्महत्या गरेका छन् । त्यसमा दलिहरुको संख्या बढि रहेको छ । ४७ जनामा १५ जना दलित रहेका छन् । १३ जना क्षेत्री, ३ जना व्राम्हण र ३ जना जनजाती र बाँकी अन्य रहेका छन् । आत्मा हत्या गर्नेहरुमा बढि मात्रमा युवा उमेरका बढि छन् । आईए एक जना र एसलसी पास गर्ने चार जना छन् । कक्षा ८ भन्दा तल पढ्नेहरु बढि छन् । मानसिक कारणबाट आत्मा हत्या गर्नेहरुको संख्या बढि छ । १९ जनाले मानसिक समस्याका कारण आत्मा हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको विवरणले देखाएको छ ।
१० जनाले आर्थिक समस्याका करण, ५ जनाले पारिवारिक समस्या र ३ जनाले प्रेममा असफल भई आत्महत्या गरेको र अन्य कतिपयले विमाारले दिक्क भएर का काराणले आत्मा हत्या गरेको पाईएको छ । मानसिक समस्याको कारक गरिवी, अनमेल सम्वन्ध र असफल प्रेम बढि देखिन आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलानामा गत आर्थिक वर्षको आत्महत्या संख्या करिव दश जनाले बढि हो ।